Plastic ịkpụzi ogbako - Yuyao Jera Line Dabara Adaba Co., Ltd.
Jera akara nwere ihe karịrị nkedo plastik 16. Ọgwụ na-akpụzi na-emepụta akụkụ plastik nke ngwaahịa JERA fiber plastic. Usoro ntanye plastik bụ usoro nrụpụta maka imepụta akụkụ site na ịgbanye ihe wụrụ awụ na ebu. Wee mepụta ezipụta akụkụ ndị ọzọ maka ngwaahịa anyị. Anyị na-eme R&D ma mepee ngwaahịa metụtara mmepụta site na teknụzụ a.
Ihe nkedo nkedo nkedo nke nkedo nke Jera na emeputa ihe ndi ozo:
-FTTH anchoring mwekota, nkpirikpi mwekota na nkwusioru mwekota
- dobe eriri USB
-Fiber optic igbe na mmechi
-Electrical ịkpọpu akụkụ njikọ
-FTTH waya brackets
-Fiber optic cable nkwụnye
-LV abc iko iko
-Low voltaji USB clamps
Akụrụngwa ejiri maka ọgwụ plastik bụ polymer dị ka Nylon, ABC, PC, PP, wdg.
Site na iji teknụzụ a, Jera fiber nwere ikike nyocha na imepụta ngwaahịa ọhụụ ma mee ụfọdụ ndị ahịa chọrọ ngwaahịa dabere na usoro anyị dị ugbu a. Ọ na - eme Jera fiber nwere ọtụtụ ngwa ahịa iji mejuo ihe dị iche iche ndị ahịa chọrọ. Ngwa ahịa JERA na-asọ mpi n'ahịa
Site na nkedo ndị a, anyị nwere ike mepụta akụkụ ogwu ahụ n'onwe anyị. Ọ na-azọpụta ndị na-eri na-eme ka unit price nke ngwaahịa ndị asọmpi, na anyị nwere ike mfe ịchịkwa àgwà site onwe anyị.
Improvinglọ ọrụ na-emepụtawanye kwa ụbọchị yana ihe ngwọta maka melite arụmọrụ na-eme ka JERA melite kwa ụbọchị.
Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa anyị azịza zuru oke maka iwulite netwọkụ nzikọrịta ozi. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka inwekwu nkwado, nwee olileanya na anyị nwere ike iwulite mmekọrịta ntụkwasị obi, ogologo oge.